1. Nei Mwari akaronga vaIsraeri vekare?
Mwari akaronga vazukuru vatateguru Abrahamu kuti vave rudzi uye akavapa mitemo. Akadana rudzi rwacho kuti “Israeri” uye rwaifanira kuita kuti kunamata kwechokwadi uye shoko rake zvirambe zviripo. (Pisarema 147:19, 20) Saka vanhu vemarudzi ose vaizobatsirwa kuburikidza nevaIsraeri.—Verenga Genesisi 22:18.
Mwari akasarudza vaIsraeri kuti vave zvapupu zvake. Zvakaitika kwavari kare zvinoratidza kubatsirwa kunoitwa vanhu nokuteerera mitemo yaMwari. (Dheuteronomio 4:6) Nokudaro, kuburikidza nevaIsraeri, vamwe vaizosvika pakuziva Mwari wechokwadi.—Verenga Isaya 43:10, 12.
2. Nei vaKristu vechokwadi vakarongwa?
Nokufamba kwenguva, Mwari akarega kuda rudzi rwaIsraeri, uye Jehovha akarutsiva neungano yechiKristu. (Mateu 21:43; 23:37, 38) Iye zvino vaKristu vechokwadi vari kushumira sezvapupu zvaJehovha, panzvimbo pevaIsraeri.—Verenga Mabasa 15:14, 17.
Jesu akaronga vateveri vake kuti vaparidze uye kuti vaite kuti vanhu vemarudzi ose vave vadzidzi. (Mateu 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Basa iri rava kuitwa pamwero mukuru zvikuru iye zvino mukuguma kwemamiriro ezvinhu aripo. Kokutanga munhoroondo yevanhu, Jehovha akaita kuti mamiriyoni evanhu vanobva mumarudzi ose abatane mukunamata kwechokwadi. (Zvakazarurwa 7:9, 10) VaKristu vechokwadi vakarongwa kuti vakurudzirane uye vabatsirane. Mupasi rose, vanova nepurogiramu yakafanana yemirayiridzo inobva muBhaibheri pamisangano yavo.—Verenga VaHebheru 10:24, 25.
3. Sangano remazuva ano reZvapupu zvaJehovha rakatanga sei?
Kuma1870 boka diki revadzidzi veBhaibheri rakatanga kunzwisisa chokwadi cheBhaibheri chakanga chava nenguva refu chisisazivikanwi. Vakaziva kuti Jesu akanga aronga ungano yechiKristu kuti iparidze, saka vakatanga mushandirapamwe wokuparidza Umambo mupasi rose. Muna 1931 vakatanga kushandisa zita rokuti Zvapupu zvaJehovha.—Verenga Mabasa 1:8; 2:1, 4; 5:42.
4. Zvapupu zvaJehovha zvakarongwa sei?
Muzana remakore rokutanga, ungano dzechiKristu munzvimbo dzakawanda dzakabatsirwa nedare rinodzora raiona Jesu seMusoro weungano. (Mabasa 16:4, 5) Mazuva anowo, Zvapupu zvaJehovha mupasi rose zvinobatsirwa neDare Rinodzora revakuru vane ruzivo. Rinotarisira mahofisi emapazi eZvapupu zvaJehovha anoshandura, anodhinda, uye anoparadzira zvinyorwa zvinoshandiswa pakudzidza Bhaibheri zvinobudiswa mumitauro inopfuura 600. Nokudaro, richishandisa Magwaro, Dare Rinodzora rinokurudzira uye rinotungamirira ungano dzinopfuura 100 000 dziri mupasi rose. Muungano imwe neimwe, varume vanokodzera vanoshumira sevakuru, kana kuti vatariri. Varume ava vanotarisira norudo boka raMwari.—Verenga 1 Petro 5:2, 3.
Zvapupu zvaJehovha zvakarongwa kuti zviparidze mashoko akanaka uye kuita kuti vanhu vemarudzi ose vave vadzidzi. Kufanana nevaapostora, tinoparidza paimba neimba. (Mabasa 20:20) Uyewo tinodzidza Bhaibheri nevanhu vanenge varatidza kuda chokwadi nemwoyo wose. Asi Zvapupu zvaJehovha havasi sanganowo zvaro. Tiri mhuri ina Baba vane rudo. Tiri hama nehanzvadzi dzine hanya nomumwe nomumwe. (2 VaTesaronika 1:3) Sezvo vanhu vaJehovha vakarongwa kuti vafadze Mwari uye vabatsire vamwe, vanoumba mhuri inofara kupfuura dzose dziri panyika.—Verenga Pisarema 33:12; Mabasa 20:35.